UKomphela kwiPirates, sidalula okubambezele - Impempe
UKomphela kwiPirates, sidalula okubambezele
USteve Komphela nguye ohamba phambili ekutheni athathe izintambo kuJosef Zinnbauer kwi-Orlando Pirates – sekuvimbe izintwana ezincane nje.
Impempe ike yabika ngeviki elidlule ukuthi uKhomphela okwiMamelodi Sundowns njengamanje nguye obhekwe kwiPirates. Lokhu kwavela ngemuva kokuthi uMandla Ncikazi eshiye isigubbhukane kwiGolden Arrows, wavumbuka kwiPirates kungakapheli sikhathi esitheni.
IPirates ifuna ukwakha kabusha ithimba labaqeqeshi kulandela ukuqeda enye isizini ingenelisekile ngendlela iqembu elisebenze ngayo. Osondelene naleli qembu uthe abaphathi bashaya amakhala ngaleli thimba kulokhu.
“Sebekwenze konke ngokwabadlali. Uma ubheka iPirates inabadlali abahle kakhulu. Ungacishe uyiqhathanise neSundowns kuphela kuleli ngokwezinga labadlali.
“Kodwa umehluko mkhulu phakathi kwala maqembu uma ubheka impumelelo nendlela adlala ngayo. IPurates iyiwinile indebe kodwa ayigculisi neze ngoba uma ike yathola umdlalo onzima ivele icuthuluke nje,” kusho lo mthombo.
Bakhona nabanye abaqeqeshi okucuthiswe ngabo uma kwenzeka uKomphela egcina engatholakalanga. Njengamanje sesingakuveza ukuthi u-Adel Amrouche wase-Algeria, Gavin Hunt noDan Malesela ngabanye babaqeqeshi okungase kukhalelwe kubo uma izinto zigcina zingalunganga kuKomphela.
Inkinga esibhekene nePirates ngoKomphela njengamanje wukuthi unenkontileka yeminyaka emithathu kwiSundowns okungelula ukuphuma kuyo. Kodwa umthombo wethu uveze ukuthi usihlalo wePirates, u-Irvin Khoza usaxoxisana nabaphathi beSundowns ngalokhu.
“Kuyaxoxiswana futhi angiyiboni into engaba yinkinga ngoba vele akukho okutheni abamdingela khona uKomphela kwiSundowns. Inkinga kungaba wukuthi okwamanje abanaye ophethe ithimba labaqeqeshi futhi kungenzeka bagcine benike yena lesi sikhundla,” kusho yena.
UNcobo uwusola kumshushisi wePSL umsindo wamacala: https://bit.ly/3gX2f4L
Okunye okutholwe yiMpempe wukuthi iPirates isenenkontileka noJosef Zinnbauer waseGermany. Nokho kuyavela nokuthi le nkontileka sekuvele kuvunyelwene ngokuthi inqanyulwe.
UZinnbauer kumanje ukwelakubo la asayoshaywa khona wumoya, kodwa sekukhona vele amahlebezi okuthi ngeke esabuya.
“Angimboni ebuya uZinnbauer. Vele izinhlelo zokuvala isikhala sakhe sezenziwe. Ukuqashwa kukaNcikazi yena engazi kumele kukutshele ukuthi isikhathi sakhe siphelile.
“Abaphathi bawubonile umbiko wakhe wesizini futhi bayakuzwa akushoyo ikakhulukazi ngokulinyalelwa abadlali abamqoka.
“Kodwa abenelisekile, bakhala ngokuthi leli qembu linabadlali okungenani abathathu abakhaliphile indawo ngayinye ngakho akumele lisokole uma kukhona ongekho,” kuchaza lo mthombo.
Ngokuthola kweMpempe, uKomphela uzoba ngumqeqeshi, iphi lakhe lokuqala kube nguNcikazi bese elesibili kube nguFadlu Davids. UDavids uzobuye agxile kakhulu nasenkulisa yeqembu ukwenzela ukuthi kube nokuxhumana phakathi kweqembu elikhulu nenkulisa.
Previous Previous post: UNcobo uwusola kumshushisi wePSL umsindo wamacala
Next Next post: Lugobile kuMaMkhize, iRoyal AM izodlala eyokuhlunga